तुरुन्तै हेर्नुहोस भिडियो तलतिर राखिएको छ
यो पनि पढ्नुहोस। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल लामो समयदेखि वर्षौं अघि भारतसँग गाभिएका भू भाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लागिपरिरहेका छन्‌ । नेपालको धेरै जमिन भारतले कब्जा गरेको छ,
देखिनेगरि नै भारतले सिमा अधिक्रमण गरेको छ भन्ने विषय उठिरहँदा नेपालको ठूलो भू भाग, त्यो पनि धेरै वर्ष अघि ब्रिटिसले लगेको हुँदा,फिर्ता पाउने ग्रेटर नेपालको उद्देश्य देख्दा धेरैलाई अचम्म लाग्छ I यस विषयमा अध्यक्ष नेपाल भन्छन, हामीले बिना काम र चर्चाका निमित्त भू भाग मागेको हैन ।
नेपालले सुगौली सन्धी ब्रिटेनसँग गरेको थियो I ब्रिटेनले पछि उक्त सन्थी नै रह गर्दा त्यो कुरा भारतसँग लागू हुँदैन भनेको कारण हामीले यो कुरा उठाएका हौं । नेपालका अनुसार सन्‌९९५० को नेपाल भारत सम्बन्धको धारा ८ लै नेपाल र बेलायतले गरेका सबै सम्झौता रह हुन्छन्‌ भनेको थियो ।
त्यसमा सुगौली सन्धी पनि पर्यो । यही सिद्धान्तमा अडिग रहेर भारतको कब्जामा रहेको ६० हजार बर्ग किलोमिटर जमिन वैधानिक रुपमा ग्रेटर नेपालले माग गरिरेहको उनले बताए ।
भारतले उक्त भू भाग ब्रिटेनले दिएको उपहार मान्ने गर्छ । यसरी भारतले उक्त भू भाग उपहार मान्ने कुरा तथ्यमा आधारित नभएको उनले जानकार गराए । डुन्डिया इन्डिपिन्डेन्ट एक्ट’अनुसार ब्रिटेनले जुन अवस्थामाआएका थियौं त्यही अवस्थामा जाँदै छौँ,
ब्रिटिस क्राउनले प्रयोग गरेको अधिकार इन्डियामा आउने कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनिएको थियो’ उनले थपे । नेपालको तुलनामा आणविक शक्ति सम्पन्न भारतले वार्ताको आधारमा नेपालको भू भाग फिर्ता दिँदैन ।
नदिए पनि युद्ध गर्ने क्षमता नेपालसँग छैन ।यसबारेमा प्रश्न गर्दा नेपाल भन्छन्‌, वार्ता नै भएको छैन । वार्ता त हुनुपर्छ नि । संवाद सुरु गर्नेवित्तिकै भारतले कि हुन्छ कि हुन्न भन्नुपर्यो । हुन्न भन्यो भने नेपालले किन भनेर प्रश्न गर्दा भारतसँग उत्तर नै छैन ।
हाल नेपालको राजनीतिलाई तरंगित गरेकोभेनेजुएला प्रकरणले नेकपाको आलोचना भइरहेको प्रकरण डन्डो प्यासेफिक’ स्ट्राटिजिसँग जोडिएको भन्दै उनले भने, यसमा नेपालले नेतृत्व गर्ने होइन नेपाललाई उपयोग गर्ने हो ।
नेपालको भूमि प्रयोग गर्न अमेरिकालाई सहज हुने भयौ । चीन आज प्रतिस्पर्धाको आधारमा हेर्दा आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छ । किनभने चीन साहसी छ । पहिला साहस चाहिन्छ I चीनको हतियार उठ सा 05:10 र 21 लडाइ भएको छ ।
प्रत्येक लडाईमा चीनपछाडि आएको छ । आफ्नो भू भाग बचाउनको निमित्त चीन आएको छ चीनको अभिन्न अंगको रुपमारहेको तिब्बतलाई टुक्राउने खेलको अभिन्न अंग भएको भन्दै उनले वास्तावमा राजनीतिक रुपमा तिब्बत र चीन नटुक्रिने दाबी गरे । उनले भने,
चीनको कुनै पनि क्षेत्र अमेरिकाले चाहँदैमा टुक्रिदैन ।भैनेजुएलाको तेलको सबैभदा ठूलो ग्राहक नै अमेरिका हौ । तेलको धेरै भण्डार भएको मुलुकमा भेनेजुएला पनि पर्छ । यसकै रणनीतिमा षड्यन्त रचेको कुरमा कुनै शंकै नभएको उनको धारणा छ
I यसबारे प्रचण्डले बोल्नुपर्ने जरुरी नभएकको भन्दै उनले प्रश्न गरे कतार, इराकमा नाकाबन्दी हुँदा नेपाल बोलेन I भेनेजुएला प्रकरणमा किन बोल्नु ? आफ्नो जमीन सुरक्षा र पीडाको बारेमा खै बोलेको ?
२०७८ मंसिर १९, आईतवार २३:०७ 1 Minute 431 Views